पाल्पामा भेटिए यस्ता अचम्मैका सर्प मान्छे , देखाए खत्रा चमत्कार ! संसार चकित(भिडियो) – Khabaarpati
November 3, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on पाल्पामा भेटिए यस्ता अचम्मैका सर्प मान्छे , देखाए खत्रा चमत्कार ! संसार चकित(भिडियो)
पाल्पा, तपाईंलाई सर्पदेखि कत्तिको डर लाग्छ? ‘निकै लाग्छ नि! प्राय सबैको जवाफ यस्तै आउछ अझ सर्पलाई समात्न पर्यो भने, सर्प देख्ने वित्तिकै टाप कस्ने तपाइँ हामी प्राय सर्प समात्ने त कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं । तर पाल्पा जिल्लाको अर्गलीका प्रबिन पाण्डेलाई सर्प समात्नु सामान्य कुरा हो।
सर्प देख्ने वित्तिकै टोक्छ भन्ने जोकोहीलाई प्रबिनको कला देख्दा अचम्म लाग्छ। उनि सर्प समात्ने मात्र होइन। सर्पलाई शरीरका विभिन्न अंगहरुमा खेलाउँछन्। सर्पहरु घाँटीमा बेरेर शरीरको जुनसुकै भागमा खेलाउन खप्पिस छन् उनी।
सर्पसँग आफ्नो सामिप्यता गाँसेका प्रबिन हालसम्म सामान्य सर्पदेखि सबैभन्दा खतरनाक मानिने किङ कोब्रासम्म गरी सय बढी सर्पहरु समातिसकेका छन्। प्रबिन चिन्ने उपनाम पनि छ –‘सर्प समात्ने मान्छे’ र ‘स्नेकर म्यान’। उनले छोटो समयमै पाल्पा तथा छिमेकी जिल्लामा आफूलाई स्नेकर म्यानको रुपमा चिनाउन सफल भएका छन्।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
एकपटक सर्प समातिसकेपछि उनको तन्नेरी जोस बढयो। उनको मनमा मैले सर्प समात्न सक्दो रहेछु भन्ने भान बढ्यो। त्यसपछि भने उनले गाँउघरमा कतै सर्प देख्नासाथ समात्न थाले।
प्रबिनले पनि आफूले सर्प समात्दा धेरै व्यक्तिको ज्यान बँच्छ भने किन नसमात्ने भनेर सर्पहरु समात्दै गए। उनलाई क्रमश सर्पसम्बन्धी फोनहरु आउँन थाल्यो। उनि छिमेकी जिल्लाहरुसम्म पुुगेर सर्प समात्न थाले। अहिले जिल्लामा मात्र नभएर छिमेकी जिल्लामा कसैको घरमा सर्प पस्या भने प्रबिन लाई फोन आउँने उनी बताउछन् ।
प्रबिनले जब सर्प समात्न थाले तब घरका सबै सदस्यहरु डराए। यस्तो काम गर्न हुँदैन भनेर परिवारका सदस्यहरुले सम्झाउन थाले। सर्पले टोकेर ज्यान नै जानसक्छ भन्दै सबैजनाले उनलाई आउँदा दिनमा सर्प नसमात्न आग्रह गर्थे। तर उनले सर्पहरु समातेर घरमा लगेर राख्न थाले। त्यति बेलासम्म उनको चर्चा गाउँमा राम्रैसँग भएको थियो।
उनको घरमा विज्ञान पढेका विद्यार्थीहरु पुग्न थाले। तिनीहरुले यो राम्रो काम हो भन्थे। ‘उहाँहरु आफू सुरक्षित भएर सर्प समात्नुु राम्रो हो, यसबाट धेरै कुराहरु सिक्न पाईन्छ भन्नुहुन्थ्यो’ प्रबिन भन्छन् ‘त्यसपछि सबैजना सकारात्मक हुुनुुभयो।’ उनले राम्रोसँग बुुझेका छन् सर्पलाई केही नगरे त्यसले केही गर्दैन।
नेपालगञ्जमा भेटियो नागमणि, २ करोडमा बेच्नै लाग्दा यस्तो घटना भयो, सबै चकित
नेपाली फोटो पत्रकारको हिम्मत, आइसले जमेको गोसाइकुण्ड तालमा पौडी [ भिडियोसहित ]
February 1, 2021 goodmam